प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– बिनालाई के गर्ने हो? - ramechhapkhabar.com
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– बिनालाई के गर्ने हो?
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। तर, मन्त्रीमा कस्लाई राख्ने र कस्लाई हटाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
यसैक्रममा अध्यक्षद्वय विच खानेपानी मन्त्री विना मगरेको षियमा पनि छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बिनालाई के गर्ने हो?’ भनेर प्रचण्डलाई सोधेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले कुनै जवाफ नदिएर मुस्कुराएको श्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विना मगरेको कार्य सम्पादनवाट सन्तुष्ट छैनन् । उनलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने सोचमा छन्– ओली । तर, पार्टी एकताको विषयमा भर्खरै सहमति गरेको र पार्टी फुटनवाट जोगाएको सन्देश दिन प्रचण्डको राय लिएरै अगाडि वढ्नु पर्ने ओलीको वाध्यता छ। यहि फाईदा उठाएर प्रचण्ड वुहारीलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहान्छन्।
६ असोजको सचिवालय बैठकयता दुवै अध्यक्ष लगातार छलफलमा छन् । दुई अध्यक्ष विच वामदेव गौतमलाई मन्त्री वनाउने विषमा पनि सहमति वन्न सकेको छैन । ओली १४ असोज अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहान्छन्। तर, प्रचण्ड भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको गौतमको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काम रोक्नु पर्ने सोचमा छन् ।
प्रचण्डले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री वनाउन ओलीलाई भनिरहेका छन् । तर, ओली भने गौतमलाई सरकारमा ल्याउँदा उपप्रधानमन्त्री वनाउनु पर्ने भएकाले समीकरण विग्रने चिन्तामा छन् ।
छलफलमा सहमति जुटेमा जतिसक्दो चाँडो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सोचमा ओली रहेको श्रोतले जनाएको छ । अध्यक्षयद्वयबीच तीनवटा मन्त्रालय टुक्र्याएर २४ वनाउने विषयमा भने सहिमति जुटिसकेको छ।